ပိုချက်တီနို ၊ တန်ဟတ် တို့ကို မရခဲ့ပါက ယူနိုက်တက်တို့ အစားထိုးခေါ်ယူသင့်တဲ့ နည်းပြကို ဖာဂူဆန် အကြံပြုပြောဆို - xyznews.co
ပိုချက်တီနို ၊ တန်ဟတ် တို့ကို မရခဲ့ပါက ယူနိုက်တက်တို့ အစားထိုးခေါ်ယူသင့်တဲ့ နည်းပြကို ဖာဂူဆန် အကြံပြုပြောဆို
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဘောလုံးဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဂျွန် မာတော့ နဲ့ အဖွဲ့ဟာ နွေရာသီမှာ ခန့်အပ်မယ့် နည်းပြသစ် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်များ နေကြပါတယ် ။
လက်ရှိ ယာယီ နည်းပြ ရပ်ဖ် ရန်းနစ် ဟာ ရာသီ အကုန်မှာ အားကစား ဒါရိုက်တာ ရာထူးကို ပြောင်းလဲ ရယူ သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကာလရှည် ကိုင်တွယ် နိုင်မယ့် နည်းပြ တယောက်ကို ယူနိုက်တက် တို့ ခန့်အပ်ဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင် နေကြပါတယ် ။
အခုချိန်ထိ တော့ ဘယ်နည်းပြ နဲ့မှ သဘောတူညီမှု မရရှိ သေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ရေပန်းစား သတင်းကြီးသူတွေ ကတော့ ရှိထားနှင့် ပါပြီ ။
PSG နည်းပြ မော်ရီစီယို ပိုချက်တီနို ၊ အိုင်ယက်စ် နည်းပြ အဲရစ် တန်ဟတ် တို့ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာဖို့ ထိပ်ဆုံးကနေ ရေပန်း စားနေကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိ နည်းပြတွေကို မရခဲ့ဘူး ဆိုရင်ရော . . .
ဂျွန်မာတော့ ကတော့ အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ဆီကနေ အကြံဉာဏ် ပေးမှုတွေ ရယူနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ မပါပေမယ့် ဖာဂူဆန် ဟာ ဒီကနေ့ အထိ အသင်း အတွက် အချိန်ယူ ကူညီ ပေးနေပြီး အသင်း အကြီးအကဲတွေ ကလည်း ဖာဂူဆန် ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လေးလေးစားစား ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးခဲ့ ပါတယ် ။
အခုနောက်ဆုံး ထွက်ပေါ် လာတဲ့ သတင်းအရ ဆာအဲလက်စ် ဟာ ဝါရင့် နည်းပြကြီး အန်ဆယ်လော့တီ ကို ပိုချက်တီနို ၊ တန်ဟတ် တို့ကို မခေါ်နိုင်ခဲ့ ပါက ဒုတိယ အစီအစဉ် အဖြစ် ခေါ်ယူသင့်တဲ့ နည်းပြ အဖြစ် အကြံပြု ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် ကို ကိုင်တွယ် နေပြီး လာလီဂါ အမှတ်ပေး ဇယားကို ဦးဆောင်ပေးထား နိုင်ပေမယ့် ဥရောပ အောင်မြင်မှု မရရှိပါက ရာသီ အကုန်မှာ လမ်းခွဲ ထွက်ခွာ နိုင်ချေ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းကြီးနေ ပါတယ် ။
ရီးရဲ ဥက္ကဌ ပီရက်ဇ် ဟာ ပိုချက်တီနို ကို အန်ဆယ်လော့တီ ရဲ့ နေရာ အတွက် စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းက သတင်းထွက်လာ ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက် နဲ့ အပြိုင် ကမ်းလှမ်းဖွယ် ရှိတယ်လို့ ကောလဟာလ ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက် ဘက်ကလည်း ပိုချက်တီနို ရောက်မလာခဲ့ ပါက ဒုတိယ အစီအစဉ် အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမယ့် နည်းပြတွေကို စာရင်းပြုစု ထားပြီး အန်ဆယ်လော့တီ ရဲ့ အမည်လည်း ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် နည်းပြကြီး တယောက် ဖြစ်ကာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို အေစီမီလန် ၊ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တို့နဲ့ ရယူ ထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ ဆာအဲလက်စ် နဲ့ ရင်းနှီးသူ တယောက်ဖြစ်သလို လက်ရှိ ယူနိုက်တက် မှာ ကစားနေတဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ၊ ရာဖေး ဗာရန်း တို့ကိုလည်း ရီးရဲမက်ဒရစ် မှာ ကိုင်တွယ် ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ယူနိုက်တက် မှာ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးပြီး တိုက်စစ်မှူးကြီး ကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြု နိုင်ဖွယ် ရှိသလို အခြားနည်းပြတွေထက်လည်း ပိုမို ထိန်းကွပ် နိုင်ချေ ရှိနေတာကြောင့် အန်ဆယ်လော့တီ ရဲ့ အမည်ဟာလည်း ယူနိုက်တက် နည်းပြလောင်း စာရင်းမှာ အားကောင်းတဲ့ အလားအလာ တခု အဖြစ် ပါဝင်နေခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article အာဆင်းကို အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ရာထူး တစ်နေရာ ပေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဗင်ကာတီရှန်
Next Article ချဲလ်ဆီးကို ဝယ်မယ့် သူဌေးများ ၊ ဒေါ့မွန် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ရှေ့တန်းလူ ၊ PSG နဲ့ပွဲမှာ ပြန်ပါလာနိုင်တဲ့ ရီးရဲစတား တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ